Ngwurugwu Heterotrophic: gini ka ha bu, njirimara na mkpa | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Heterotrophs: ihe ha bụ na njirimara
Portillo nke German | | Ike imeghari ohuru
Na okike na gburugburu ebe obibi, enwere otutu ihe di iche iche na nhazi dika odi nri. Otu n'ime ha bụ ntule heterotrophs. Ha bụ ihe dị ndụ dị nkenke na usoro obibi obibi na usoro nri. Ha bụ ndị na-enweghị ike iwepụta nri nke aka ha ma na-eri nri na ihe ndị ọzọ dị ndụ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe ndị dị ndụ, ụdị ha na mkpa ha.
1 Ngwurugwu Heterotrophic
2 Nhazi nke onu ogwu heterotrophic
3 Ngwongwo nri
4 Mkpa okike
Na ihe gbasara ndu, odi nkpa ighota umu ihe di iche-iche ji enye onwe ha nri. Nke a bụ ọmụmụ nke metabolism, gịnị bụ usoro na mmeghachi omume nke na-emepụta mgbanwe ihe na ahụ. N'ọhịa nke metabolism, mgbe anyị na-ezo aka n'ụzọ nke inweta nri, anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị na usoro abụọ na ụzọ nke ịkepụta ụdị ndụ; heterotrophic na autotrophic ntule. Ha nile mejuputara ebe obula na ihe ndi ozo di n'ime uwa nke ndi nile bi.
Cheta na anyi na amu akwukwo metabolic na oru di nkpa n’ime aru. Anyị nwere ike ịchọta ụdị ndụ ndị a n'ụdị okike dị iche iche, nke chọrọ ume na carbon guzobere iji mepụta ma mepụta sel ha. Heterotrophic ntule bụ ndị na-enweghị ike iji aka ha edozi carbon nri. N'ihi ya, nri ha na - enweta site na nri nri sitere na ihe ndị ọzọ nwere carbon dị ka ihe ọkụkụ na anụmanụ.
Usoro nri na-edozi ahụ nke ihe ndị a gụnyere ma na-anọchi anya ndị niile dị ndụ na-etinye ihe ndị dị ndụ na ihe ndị ọzọ. Nke a na - eme ka ha ghara inwe ike mepụta ihe nke ha site n’ihe ndị dị mfe na - arụ ọrụ. N'ezie, anyị nwere ike ịgụnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ anụmanụ niile sitere na mammals, azụ na nnụnụ, ọ bụ ezie na ero, protozoa na ọtụtụ nje bacteria sokwa na otu a. Have ga-enyocha usoro nri iji hụ ebe ha dị.
Ha bụ ndị isi, ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ndị isi. Site na -ewelata bekee carbon, ihe ndị a ha nwere ike iji ike niile ha na-eri maka uto na mmepe ha. Ha na-ejikwa ya arụ ọrụ ụfọdụ maka ndu na ọmụmụ.
Nhazi nke onu ogwu heterotrophic
Ka anyị hụ ihe nhazi ọkwa nke ihe ndị a:
Ngwurugwu Saprobian: Ha bụ ndị ọrụ kachasị mkpa nke ire ere na nlọghachi nke ihe niile dị na ala. Ọ bụ ha na-ahụ maka ịmịkọrọ ihe ndị dị ndụ nke ihe ndị ahụ nwụrụ anwụ site na nsị ma ọ bụ n'akụkụ ọ bụla. Imirikiti nje, ero, ahụhụ, ikpuru, wdg. Ha so n’otu a.
Detritivore ntule: bụ ndị na-amịkọrọ ihe na-edozi ahụ site na nje nwụrụ anwụ, ma ọ bụ site na nsị ma ọ bụ n'akụkụ ọ bụla. Ihe dị iche nke saprobes bụ n'ihi n'eziokwu na a na-eme ka ihe ndị na-edozi ahụ na-edozi ahụ site na ị suụ ara, ha kwesịrị ịta ahụhụ ma ọ bụ belata ihe oriri na-edozi ahụ. N’ebe a, anyị na-ahụ enwe, ikpuru, na-efe larvae, kukumba oké osimiri, wdg.
Ngwurugwu na-eri ihe: Ha bụ ndị na-eri nri na akụkụ ahụ niile. N'ebe a, anyị na-ahụ ọdụm, sharks, ugo, wdg. Enwere ike kewaa ha n'otu n'otu n'ime ụdị ndị a: dinta: ha bụ ndị na-egbu ma jide anụ oriri ha. Ndị na-emerụ emerụ: ha bụ ọrụ maka iri nri ndị dị ndụ nwụrụ ma ọ bụ ndị ọzọ akara. Parasaiti: ha bụ ndị na-enweta nri site na ndị ọbịa dị ndụ.
A pụkwara ike kee ihe ndị dị ndụ na Heterotrophic na-adabere n'ụdị nri ha nwere:
Ihe niile: ha bụ ndị ahịa na-eri nri na ahịhịa na anụmanụ. Ihe ndi ozo nwere ike iri ihe obula, ya mere ha nwere obere nsogbu inweta ihe edozi.
Anụmanụ: nanị anụ ka ha na-eri. A na - enweta ike ahụ site na ihe ndị ọzọ ma na - eji lipids echekwara n’ahụ gị.
Nkpuru osisi: rie nkpuru na ahihia. Ha bụ ndị na-eri isi na usoro nri.
Anyị ekwuola banyere usoro nri tupu oge eruo ma ọ dị oke mkpa mgbe ị na - ekekọta ihe ndị dị ndụ. Ọnọdụ trophic na-adabere na nhazi nke ihe ndị na-adabere na mmalite nke okwu ha na-eri. Ha na-adabere n'ebe obibi ha bi. Nkesa kachasị na-adabere na ọkwa nke ebe okpomọkụ ma na-echebara ndị ahịa echiche. Ka anyị lee ebe a na-ahụ ụmụ anụmanụ heterotrophic na nhazi ha:
Ndị ahịa mbụ: ha bu anumanu ahihia nke na - eri nri nke autotrophic organism.
Secondary ọkụ: Ha bụ anụmanụ ndị na-eri anụ nke ndị isi na-azụ azụ.
Degree: Ha ji aha decomposers mara ha ma buru ndi azurua nri. Ha gụnyere saprophagi na saprophytes.
Dị ka anyị kwuru na mmalite nke isiokwu ahụ, ihe ndị dị ndụ heterotrophic dị ezigbo mkpa na gburugburu ebe obibi. Ha bụ ihe na-eme ka mbara ala dị iche iche dị iche iche yana ụdị ụdị dị iche iche dị iche iche dị iche iche nwere ike ịdị na ndụ dị iche iche na gburugburu ebe obibi. Ha so na nri nri na ha na-eme ihe na mgbanwe nke ahịhịa na ume.
Nri ya na-ewere ọnọdụ mgbe mkpụrụ ndụ na-eri ihe ndị a na-emepụta. Otú ọ dị, ọ na-enye ohere mgbanwe nke nri n'ime ihe nke aka ya. Ha bu ntule na enweta nri ngwakọta nke ihe ndị ọzọ dị ndụ, akụkụ ha nwụrụ anwụ ma ọ bụ nsị ha. Ihe a dabere na nhazi ọkwa gara aga nke anyị hụrụ.
Site n'ebe ahụ, anyị nwere ike ịkọpụta ụdị nri dị iche iche:
Holozoic nri: Ọ bụ nke a na-azụlite site na ijide njikwa ndụ m nke ụdị ndụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ mmadụ, agụ, ugo, na ọdụm na-eri nri holozoic.
Nri nri Saprophytic: bụ ihe ndị ahụ dị ndụ na-ahụ maka nri na-ere ere. N'ebe a, anyị na-ahụ otu otu ero, nje bacteria, larvae, wdg.
Parasitic oriri na-edozi: A maara ya site na parasitism ma ha bụ ndị na-enweta nri ha site na ihe ndị ọzọ dị ndụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ahịhịa heterotrophic nwere ọrụ dị mkpa na usoro okike. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere heterotrophs na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Heterotrophs: ihe ha bụ na njirimara
Ihe a ga-eji akwụkwọ ochie